VeMabhizimisi Voramba Kudzikisa Mitengo Sezviri Kudiwa neHurumende
Kunyangwe hazvo hurumende yakapa kurudziro yekuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvinodyiwa nevanhu idzikiswe kusvika payaive musi wa25 kurume, izvi zvinenge zviri kukona n’anga murapwa achida. Mitengo yezvinhu haisi kudzika.
Hatina kukwanisa kubata vamwe vakuru veConfederation of Zimbabwe Industries kana Zimabwe National Chamber of Commerce tinzwe divi ravo.
Asi gurukota rezvemaindustry Doctor Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekukwira kwemitengo yezvinhu vakati pamisangano yavakaita nevamwe vemabhizimisi vakatenderana kuti mitengo yezvinhu idzikiswe.
Vatenda havo kuti vemabhizimisi varik kuti vari kuremerwawo nezvinhu kunyanya mari yekunze yekutenga zvinhu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti zvekuda kutara mitengo yezvinhu hazvishande uye zvichatopa kuti zvinhu zvishaikwe muzvitoro.